UThomas Phillipps kunye nothando-lokuthanda iincwadi | Uncwadi lwangoku
UThomas Phillipps kunye nothando-lokuthanda iincwadi
Sonke esenza oku blog kunokwenzeka, oko kukuthi, wena osifundayo kwaye sikunika amanqaku mihla le, sinento esifana ngayo: ukuthanda iincwadi kunye noncwadi nje. Siyakuthanda ukufunda, siyathanda ukujoja iincwadi ezindala, sincoma amandla a ebook loo nto yenza ukuba kube nokwenzeka ukuba sibe nekhulu leencwadi kwiminwe yethu kwiscreen esinye, sijonge phambili ekugqibeni incwadi elungileyo esirhintyelayo kodwa kwangaxeshanye siyayisizela, kwaye ngamanye amaxesha siphinde sifunde ezo sizithandayo baninzi kakhulu kwimihla yabo nangona sineencwadi ezintsha zokufunda kuluhlu lwezinto eziza kwenziwa. Ewe, oku "kuphilile" kukuthanda iincwadi, kodwa iba nini into oyithandayo?
Ukuba singabuza UThomas phillipps singayenza. Le ndoda yayingu ibhayibhileophile (kuthethwa ngomntu onesiphatho esigqibeleleyo seencwadi) weza kuqokelela phantse Iincwadi ze-40.000 nangaphezulu Imibhalo-ngqangi engama-60.000. Wayenomdla kwiphepha, kodwa engenako ukuzifunda zonke kwaye wayengeyiyo le nto kuthiwa wonwabile ekuphambani kwakhe. Olu thando kwamkhokelela ekubeni aphulukane nobutyebi bakhe kwaye kuwo onke amabhinqa awayetshate nawo okanye awayethandana nawo.
Ezinye iinyani malunga noThomas Phillipps
Wazalelwa eManchester ngo-1792.
Wayengunyana ongekho mthethweni womenzi wempahla.
Ukufa kwakhe, wamnika indlu yendlu eyayiza kusebenza njengendawo yokuhlala ukuze enze "ubuhlanya" bakhe.
Kwiminyaka nje emithandathu ubudala, wayesele eneencwadi ezingaphezu kwe-6.
Wathenga iincwadi ngekhilo, engakhange ayeke ukujonga izihloko okanye ababhali.
Yayiluloyiko, okanye isiqabu, kuxhomekeka kwindlela obajonga ngayo abathengisi beencwadi. Xa ndambona engena kwiminyango yevenkile yakhe yeencwadi, ndandisazi ukuba uza kuphelelwa ziikopi azokuzithengisa.
Intsapho yakhe yashiyeka yaphulwe, ichithe phakathi kwe- $ 200.000-250.000 kwiincwadi.
Kumagumbi angama-20 kwindlu yendlu awayeyizuze njengelifa, ali-16 ayegcwele ngokupheleleyo ezincwadini.
Emva kokufa kwakhe ngo-1872, umzukulwana wakhe wathengisa phantse zonke iincwadi zakhe kwiibhetshi kubaqokeleli kwihlabathi liphela.
Inxalenye yokugqibela yengqokelela yakhe ayithengiswanga de kwaba ngo-2006 ...
Ngubani owaziyo, mhlawumbi enye yezo ncwadi zakudala ziphumileyo kwivenkile yakho yeencwadi sele ingokaThomas Phillipps… Ucinga ntoni ngayo yonke le nto? Uthando oluninzi okanye ukuthanda kakhulu? Kukuthini ukusetyenziswa kokuba neencwadi ezininzi ongasokuze uzifundele ubukhulu becala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » UThomas Phillipps kunye nothando-lokuthanda iincwadi
Uluhlu lweencwadi ezinconyelwe nguJoseph Brodsky, uNobel Prize kuLwazi loncwadi